UTshatha unxusa abantu ukuthi bamuvotele – Daily Worthing
Ezikaqeda isizungu Ezosaziwayo
UTshatha Ngobe oyisilomo sensizwa yakwaNongoma, unxusa abantu ukuba bamuvotele njengoba eqokwe kowe-DSTV Mzansi Viewers Choice Awards, ngaphansi kwe-Favourite Radio Personality. Le ndondo uzobe eyibanga nezinkakha ezifana no-DJ Fresh, Kgomotso Matsunyane, Siphiwo ‘Spitch’ Nzawumbi no-Seipati ‘Twasa’ Seoke.
Impela kuzobe kunguqhude manikiniki kodwa uTshatha unethemba lokuthi le ndondo iyolala kwaNongoma. Uma nawe ufisa kube njalo, mvotele ngokuthi uthumele nge-SMS igama elithi 5E ku-3920 noma ucofe *120*33033# ulandela imiyalelo, bese uzibonela ngawakho ukuthi uyayithola yini le ndondo kulo mcimbi ozoba mhlaka-14 March 2020.
UTshatha ungumsakazi woKhozi FM, wethula uhlelo Isidlo Sasekuseni kusuka ngoMsombuluko kuze kube nguLwesihlanu. NgoMgqibelo uphinde ethule uhlelo lomculo wesintu uSigiya Ngengoma okuyilona hlelo azakhela ngalo udumo emsakazweni.
You tune into the airwaves for this entertainment – here are the #DStvMVCA nominees for Favourite Radio Personality: DJ Fresh, Kgomotso Matsunyane, Siphiwo 'Spitch' Nzawumbi, Seipati 'Twasa' Seoke and Khathide 'Tshatha' Ngobe! Voting opens at 7pm.
A post shared by MzansiMagic (@mzansimagic) on Nov 28, 2019 at 5:58am PST
Ake siqophe umlando nganezakwethu siyilande le!!! Umsakazi ovelele eNingizimu Africa. To vote just SMS 5E to 39201 or Dial *120*33033# Ake sibadudule nje lokhu okwangempela bakithi, lingashoni ilanga ungavotile! Sivote every day nganezakwethu! #DStvMVCA #NgiyanethembaNina #WhatAwow #Ispheshethwa
A post shared by Tshatha Ngobe (@mctshatha) on Nov 29, 2019 at 6:12am PST
Asivoteni Bakwethu Abuye Nayo 🙏🙏🙏🙏 @mctshatha
A post shared by Mandla Maphumulo (@mampintsha_shimora) on Jan 13, 2020 at 6:36am PST
Tags: #dstvmvca, Isipheshethwa, NgiyanethembaNina, WhatAwow
Amampunge wodwa eyokunqanyulwa kukagesi ngokwa-stage 8